မိန်းကလေးတွေရဲ့ အထာပေးနည်း ၆ နည်း – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အထာပေးနည်း ၆ နည်း
Posted on January 30, 2020 January 30, 2020 by adminK
မိန်းမတို့ ဣနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရ ဆိုတဲ့အတိုင်း မိန်းကလေးအများစုဟာ သူတို့နှစ်သက်တဲ့သူကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အထာပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ကြွေ နေလား ဆိုတာ သိရှိဖို့ အထာပေးနည်း ၆ နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဣနြေ္ဒအရ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ အကြာကြီးစိုက်ကြည့်လေ့ မရှိပါဘူး။ ခဏခဏ ခိုးကြည့်တဲ့ စနစ်၊ ဖျက်ကနဲ ခဏခဏကြည့်တဲ့ စနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးပါတယ်။
မိန်းကလေးက ခဏခဏ ပြုံးပြရင် အထာပေးနေတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေကို အထာပေးဖို့အတွက် ဆံပင်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ခါရမ်းပြီး အသုံးချတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မက ရှင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ် …? ဆိုပြီး ဗြောင်ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ရေလာမြောင်းပေးစကားပြောနည်းတွေ… ဥပမာ- ကျွန်မမွေးနေ့မှာ အစ်ကို ပေးမယ့် လက်ဆောင်လေးသာ ရရင် အရမ်းပျော်မှာပဲ…အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့။
သင့်ဟာသတွေဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်မှုမရှိဘူး၊ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရင် တကယ် အားပေးဖော် ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင့်ကို ကြိတ်ခိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးပေါ့။ သင် မယုံရင် ဟာသတစ်ခုခု ပြောကြည့်။ သူ သေချာပေါက် ရယ်ပါပြီ။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သိမ်းသွင်းမရရင်တော့ သူတို့တစ်တွေ ဒီနည်းကို သုံးတတ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ အမှုမှတ်အမှတ်မဲ့ အသားချင်း ထိအောင်လုပ်တာတို့၊ တမင်တကာ ထိအောင် လုပ်တာတို့၊ သင့်ရှေ့မှာ ခန္ဓာကိုယ် ဟန်ချက်ပျက်သလိုနဲ့ သင့်အပေါ် လှဲချတာတို့ပေါ့။
မိနျးမတို့ ဣန်ဒွေ ရှပေေးလို့မရ ဆိုတဲ့အတိုငျး မိနျးကလေးအမြားစုဟာ သူတို့နှဈသကျတဲ့သူကို တိုကျရိုကျဖှငျ့ပွောလမေ့ရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူတို့က အထာပေးတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ ကိုယျ့ကို ကွှေ နလေား ဆိုတာ သိရှိဖို့ အထာပေးနညျး ၆ နညျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဣန်ဒွအေရ ယောကျြားလေးတဈယောကျကို မကျြလုံးပွူးကွီးနဲ့ အကွာကွီးစိုကျကွညျ့လေ့ မရှိပါဘူး။ ခဏခဏ ခိုးကွညျ့တဲ့ စနဈ၊ ဖကျြကနဲ ခဏခဏကွညျ့တဲ့ စနဈကိုသာ ကငျြ့သုံးပါတယျ။
မိနျးကလေးက ခဏခဏ ပွုံးပွရငျ အထာပေးနတေယျဆိုတာကို သဘောပေါကျဖို့ လိုပါတယျ။
ယောကျြားလေးတှကေို အထာပေးဖို့အတှကျ ဆံပငျတှကေို ကောငျးကောငျးကွီး ခါရမျးပွီး အသုံးခတြတျပါတယျ။
ကြှနျမက ရှငျ့ကို စိတျဝငျစားနတေယျ …? ဆိုပွီး ဗွောငျပွောမှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒီအတှကျ ရလောမွောငျးပေးစကားပွောနညျးတှေ… ဥပမာ- ကြှနျမမှေးနမှေ့ာ အဈကို ပေးမယျ့ လကျဆောငျလေးသာ ရရငျ အရမျးပြျောမှာပဲ…အဲဒီလိုမြိုးလေးတှပေေါ့။
သငျ့ဟာသတှဟော ကြိုးကွောငျးဆီလြှျောမှုမရှိဘူး၊ အူကွောငျကွောငျဖွဈနရေငျ တကယျ အားပေးဖျော ရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သငျ့ကို ကွိတျခိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေးပေါ့။ သငျ မယုံရငျ ဟာသတဈခုခု ပွောကွညျ့။ သူ သခြောပေါကျ ရယျပါပွီ။
ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ သိမျးသှငျးမရရငျတော့ သူတို့တဈတှေ ဒီနညျးကို သုံးတတျပါတယျ။ သငျနဲ့ အမှုမှတျအမှတျမဲ့ အသားခငျြး ထိအောငျလုပျတာတို့၊ တမငျတကာ ထိအောငျ လုပျတာတို့၊ သငျ့ရှမှေ့ာ ခန်ဓာကိုယျ ဟနျခကျြပကျြသလိုနဲ့ သငျ့အပျေါ လှဲခတြာတို့ပေါ့။
အိပ်ရေးပျက်တဲ့ဒဏ်ကို ဘယ်လို ကုစားကြမလဲ
အောင်မြင်ချမ်းသာလိုသူတိုင်း လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် အဆင့် ၅ ခု